UDaniel Keys kunye nesimbo sakhe esikhethekileyo kwioyile | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubetha okukhethekileyo ku-Daniel Keys wepeyinti yeoyile
Ukuba besinokuthi konke kwenziwa kwimizobo yeoyile, sonke kufuneka siyeke ukuzoba okanye ukupeyinta, kodwa ngethamsanqa akunjalo, kwaye kusekuninzi ekufuneka sikubonile, nangona umzekeliso wedijithali ubetha kakhulu ukusukela kulo nyaka kwaye kubonakala ngathi ufuna ukubuphelisa ubugcisa obuhle, okhethekileyo Ivumba lemibhobho yepeyinti kunye nokuchukumisa kwebristles yebrashi.
Kukwanje sinezandla ezininzi ezinamabala amalahle okanye ubabaze isitayile esikhethekileyo sikaDaniel Keys, umzobi oziindidi ngeendidi onento ebaluleke kakhulu kwipeyinti yeoyile. Ezo brashi, ngamanye amaxesha ezinokubonakala ngathi zinokuphazamiseka xa umntu efuna iinkcukacha, zichanekile kwaye zisibeka phambi kwazo zonke iintlobo zemizobo ezikumgangatho ophezulu.
Izitshixo zibanga isimbo esisesakhe, esitsho, kunzima ukufumana ukuba nini eyona nto ilula kukuxelisa ezakudala kwindawo apho kubonakala ngathi yonke into iyathethwa. Njengoko benditshilo ekuqaleni, kuninzi esinokubona kwaye kula maxesha ngamanye amaqhosha angadibananga amaqhosha sifumana into etsala umdla onamandla.
Oko Umoya odala kwimizobo, imihlaba kunye nokuphila nangoku Kufanelekile ukuba sikhankanye kwaye ukuba sijonga imigca yayo kwakhona sinokuthi ngamanye amaxesha ziyaphambuka, kodwa asiphazami konke konke, nganye kuzo inezizathu zayo ezizodwa.
Obo bugwenxa bokupeyinta kwabelwana ngabo kulo mgca mnye, ukulahleka kwentsingiselo okanye ukukhangela enye intoBayakwazi ukulalanisa, kwaye sithetha ngemiboniso yemihla ngemihla. Kodwa ibrashi yeKeyys kunye nobuchule bayo obunemibala obusenza sizicwilise kubugcisa bakhe.
UDaniel J. Keys Ukuzalwa ngo-1985 kusizisa kwisiphiwo esikhulu kwimizobo kwaye sinethemba lokwazi okungakumbi ngaye kwimiboniso nakwimisebenzi eyahlukeneyo. Unayo iwebhusayithi yabo ukumlandela, kunye ne-Instagram yakhe kunye neFacebook. Igcisa elibalaseleyo.
Ngaba ujonga ngakumbi ukupeyinta ioyile? IKramer ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukubetha okukhethekileyo ku-Daniel Keys wepeyinti yeoyile
Ipakethe yasimahla + ye10.000 PNG's kwi-HD enemvelaphi ebonakalayo
UGoogle ufuna abenzi bemxholo abakumgangatho ophezulu wenkqubo entsha kaGoogle + Yenza inkqubo